Color Theory — MYSTERY ZILLION
March 2010 edited April 2010 in Other
Color Theory အကြောင်းလေးကို Computer Magazine ထဲမှာ တွေ့လိုက်ရလို့ ပြန်ကူးပြီးတော့ တင်ပေးထားတာပါ. ကျွန်တော်အတွက် အနည်းငယ်အကြိုးရှိပြီး MZ က အစ်ကို တွေ အစ်မတွေ အများကြီး အကျိူးဖြစ်စေမယ်လို့ထင်ပါတယ်. ဖတ်ပြီး သိပြီးတဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ အထူးအဆန်းမဟုတ်ပေမယ့် ကျွန်တော့်လို ခပ်ပိန်းပိန်း ကွန်ပျူတာ သမားလေးအတွက်ကတော့ အရမ်းကို အကျိူးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ. အားလုံးပဲ ကျွန်တော့်လိုပဲ အကျိူးရှိပါစေ............................. အောက်က လင့်လေးမှာသွားယူလိုက်ပါ........ http://www.4shared.com/file/251685228/fa1aeb76/Color_Theory.html
ဟုတ်ကဲ ့အကိုတင်ပေးထားတာကောင်းပါတယ်။မြန်မာလိုဆိုတော ့လည်းဖတ်၇လွယ်တယ်လေ။ကျွန်တော်သိတဲ ့
color theory တင်ထားတဲ ့siteတော ့ရှိတယ် ဒါပေမယ့် မြန်မာလိုတော ့မဟုတ်ဘူး။ Web designer တွေ၊graphic designer တွေအတွက်တော့
့ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် linkကတော ့